Dr Cali Aweys Macow oo ku xiran Magaalada Hargaysa iyo Xisbiga UCID oo War kasoo saaray Xariga Dhaqtarkaas « AYAAMO TV
Dr Cali Aweys Macow oo ku xiran Magaalada Hargaysa iyo Xisbiga UCID oo War kasoo saaray Xariga Dhaqtarkaas
1145 Views Date March 30th, 2014 time 8:56 am
“Wasaaradda Caafimaadka ee Somaliland oo Ruqsad Siisay Dr. Cali Awes Macow, ma aha in la carqaladeeyo ee waa in la soo dhaweeyaa. Waxaan ka codsanayaa wasaaradda caafimaadka iyo ciidanka qaabilsan nabad-gelyadda ee dalka Somaliland in ay u kuur galaan oo xaliyaan arrinka Dr. Cali Macow oo ah aqoon yahan Soomaaliyeed oo ka shaqaysta waddamada reer galbeedka, gaar ahaan qaarada Yurub oo arrimo caafimaad doonaayey in uu ka fuliyo waddanka Somaliland.
Dhakhtarkaasi waa in loo fududeeyo hawlaha caafimaad ee uu ka waddo Somaliland wakhtigan xaadirka ah. Waxaa hore loo shaaciyey in markii ugu horeysay in wasaaradda caafimaadka Somaliland ay siisay ruqsaddii uu ku fulin lahaa hawlaha caafimaad ee baahidda ay u qabeen dad badan oo reer Somaliland ahi.
Haddana waxaa warbaahinta lagu qoraayey arrin aan ku munaasib ahayn milgihii lagu yaqaanay waddankeena. Dr Macow fadhigiisu waa dalka Ingiriiska, sababta uu Somaliland uga fulinayo hawlo Caafimaadna waxay tahay sidii uu uga faa’iideeyn lahaa aqoontiisa caafimaad ummadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan geeska Afrika maadaama ay Somaliland tahay waddan nabad ah oo dadka mandaqadda geeska Afrika ku dhaqanina ay soo wadda gaadhi karayaan.
Sharaf ayeey u tahay ummadda iyo dawladda Somaliland in aynu soo jiidan karno aqoonyahan kartidaasi oo kale leh. Sida la sheegay Dhakhtarku wuxuu leeyahay takhasus xanuunada ku dhaca haweenka, gaar ahaan Uur ku jirta, sida uu telefiishanadana uu ka sii daayey, dadkiina iyadoo aanay cidi khasbin ay isa sii Diiwaan geliyeen.
Haddii la hubsanayo aqoontiisa ma xuma laakiin intaan ruqsadda la siinin bay ahayd in la hubsaddo maadaama uu xarumo xaafimaad ku leeyahay waddanka Ingiriiska, hawsha Somalilandna uu ku fulinaayo goobo caafimaad.
Imikana waxaan jecelahay in ay ahayd Isfahan la’aan ee loo dhameeyo arrinkiisa sida ugu dhakhsaha badan. Waa wax wanaagsan in Somaliland ay yimaadaan aqoonyahano xirfado kala duwan leh oo caalamka ka socda oo dhalsho walba leh iyadoo la raacaayo shuruucdii waddanka u taallay.”
Musharaxa Jagadda Madaxweyne ee xisbiga UCID, Somaliland